NHOROONDO YOUPENYU: Martin Vrijland
Friesland, mutauro wega uye tsika yakashandiswa kuva chiwi chiri pasi peIceland chinonzi Frisland?
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	musi wa 7 January 2017	• 7 Comments
Kunyatsotarisa nhoroondo inogona kuve yakasvibiswa kunoratidzika kunge yakaratidza nekuwanikwa kwechitsuwa cheFrisland pamapupu ekare anongoratidzika kunge ari mumatara emarenda epasi rose. Wakambozvibvunza here kuti zvinogoneka sei kuti kune vanhu vakadaro vakaoma musoro vanogara kuchamhembe kweNetherlands vanotaura mutauro [...]
Muzvinyorwa zvangu zvekupedzisira ndakazvitaura kakawanda, ndezvekuti nyika ichiri kushandiswa nekare yepaharaar bloodlines. Zvichida iwe uchafunga kuti "Ah, iwe unoita sei munhu wako wakabatikana!", Asi zvakakosha chaizvo kudzidza, nokuti ipapo iwe unonzwisisa kuti nhoroondo, yezvino uye yeramangwana [...]
Brexit haisi yakaipa kuBritain yemari yemari
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	pa 14 May 2016	• 3 Comments
Dzei takaona munhau dzeNOS kuti Brexit (iyo inobva kuEurope neBrithani) inogona kuva nemigumisiro yakakomba yemari yemari yemari yeLondon. Zvisinei, izvozvi hazvina maturo zvakakwana kana isu tine hanya nezvekuchera kuti tiongorore kuti ndechipi mwoyo iwoyo wemari weLondon. Izvi [...]
Hondo muSiria uye hondo inouya kana ye'kushambadza 'yenyika
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	pa 10 May 2016
Mutungamiri weRussia Vladimir Putin akadana zuro pamusoro pekugadzwa kwesangano rekuchengetedzwa kwepasi rese kurwisana nehugandanga. Mubvunzo ndewekuti tingagumisa here kubva pane izvi kuti Putin (kana kuti Putin, kana iwe uchida) zvechokwadi inotsigira pasi rose pasi peNyika World Order. Kuti upindure mubvunzo iwoyo unogona kuva [...]
Kupemberera Zuva Rerusununguko? Unoziva here zvauri kupemberera?
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	pa 5 May 2016	• 0 Comments
Kana iwe uri kuenda kunopemberera zuva reRuberation nhasi uye iwe uchifunga kuti uri kupemberera rusununguko rweNetherlands kubva kumaNazi, tora nguva kuti uone kana ichi chiri chaiye. Pamusoro pewebsite ye Truthseeker1313.com maonero akasiyana zvakasiyana ehau anogona kuwanikwa pane [...]
Martin Vrijland anobvunzurudza Sean Hross nezvekuti boka revaharahara rinodzora sei nyika
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	musi wa 31 March 2016	• 18 Comments
Mukubvunzurudzwa naMartin Vrijland naSean Hross pane 31 March 2016 nyaya dzinokosha dzinokurukurwa. Sean Hross munyori wenhoroondo uye kubva kuSouth Africa. Pakutanga ndakabvunzurudza 25 May 2015. Mashoko eSean anokosha pakunzwisisa zvose zvatinoita nhasi [...]
Nei Europe inofungidzira kuti Erdogan haigoni asi inobata pamwe neHitler itsva
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	musi wa 11 March 2016	• 4 Comments
Pamberi Hondo Yenyika Yechipiri takaona rumutsiriro rukuru muhupfumi hweGermany. Adolf Hitler akavaka zvikwata zvakakwana uye zvivakovheni zvakavandudzwa zvikuru. Izvi zvakakonzera hupfumi hunochinja muGermany, iyo yakazosvika panguva iyo yakatambura zvikuru kubva kumitero yekudzorera mushure mekutanga kweHondo Yenyika. Kubudirira kwezvemari pamwe zvichida kwakaita Adolf Hitler mamwe [...]
Jesu akanga ari pharao muzukuru; Ndidzo mhuri dzeumambo Farao dzinza?
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	musi wa 11 March 2016	• 6 Comments
Inhoroondo sezvatinozviziva here? Ndizvo zvitendero sezvatinoita kuti zvive zvakakosha mumiririro wezvakabva here? Sei Queen Elizabeth II weGreat Britain akapfekedzwa pachigaro choumambo chakamira pamusoro pebwe raJakobho uye pamusoro pezvikwiriso zvakaita sepiramidi? Ndisati ndapedza kuongorora [...]
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	musi wa 10 March 2016	• 6 Comments
The "Kurongeka pahwaro Federal Republic of Germany (German: Verdienstorden Der Bundesrepublik Deutschland) ndiro chete Order chokuita muGermany uye rakanga 7 September 1951 wakaratidzwa Federal President Theodor Heuss. Pane chimwe chinhu chinotambudza pamusoro pemuchinjikwa uyu. Yakapiwa kune vanhu vakakurumbira vechiDutch. Nhoroondo chete: Mambokadzi Juliana uye Prince Bernhard, Queen Beatrix uye [...]
Mamiriro ezvinhu ehondo muSiriya; neWestern Roman Empire, Byzantium uye Ottoman Empire
Akaiswa mukati NHOROONDO	by Martin Vrijland	musi wa 7 March 2016	• 0 Comments
Kuti tinzwisise kuwedzera kweTurkey pasi peutungamiriri hweMutungamiri Tayyip Recep Erdogan, zvakakosha kutarisisa zvakanyanya chikamu chenhoroondo. Kana tikazosvika pakuziva nhoroondo iyi, tichazonzwisisawo kuti hondo yemazuva ano iri muSiriya inogona kutsanangurwa; iyo mapoka ari kushanda uye 'ani' kana 'chii' chaiyo [...]
Kushanya kwakazara: 2.497.022